Bogga ugu weyn » Warbixin Caafimaad oo bilaash ah
Dib u soo Celinta Faa'iidooyinka Fudud oo lacag la'aan ah
1. 5 Tricks si aad uhesho Xogtaada Bilaashka ah
Riix Halkan si aad u soo qaadato 5 Tricks si aad u heshid laba lacagood
2. 3 Cunnooyinka "Caafimaadka" ah si loo joojiyo cunista maanta! (warbixin cusub)
Waa wax lala yaabo in tan iyo wixii loogu yeeray cuntooyinka "caafimaadka" la soo bandhigo labadii iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, dadka Mareykanku way ka jiran yihiin oo ka buurn yihiin sidii hore. Waa maxay sababta tan? Ma wax aanad ogayn baa socda? Dhowr toddobaad ka hor saaxiibkeen Yuri Elkaim, oo ah khabiir ku takhasusay nafaqada adduunka ayaa go'aansaday inuu daraasad ku sameeyo kuwan loogu yeero cuntada caafimaadka. Wuxuu u dhaqaaqay inuu kashifo runta. Waxa uu ogaaday wuxuu ahaa mid naxdin leh !! Inta badan cilmi baarista uu la kulmay waxaan horey u ogaanay si kastaba ha ahaatee wuxuu helay macluumaad cusub oo ka yaabiyay. Warbixintan caafimaadka bilaashka ah ee BILAASHKA ah, Yuri waxay soo bandhigtay 2da cunno ee "caafimaadka" ah oo ay tahay inaad joojiso cunista tan iyo maanta!
3 Cuntada Caafimaadka ee Jooji Cunitaanka <———— Soo degso BILAASH ah (PDF)
3. 5 Cabsida Detox Si Looga Qaado
Warbixintan caafimaad ee bilaashka ah waxaa sidoo kale sameeyay Yuri Elkaim. Warbixintan BILAASHKA ah, wuxuu ka hadlayaa 5 khiyaano detox si looga fogaado. Warbixintani waxay ka hadlaysaa:
1. Khatarta Dhibaatada Khatarta ah ee Khashinka ah
2. Acai Berry Kudhaan Nadaafad
3. Kudhinta Nadiifinta Qamriga Detox
4. Noocyada Cagaarka ah ee Maqnaanshaha Culayska
5. Xaqiiqda ku Saabsan Master Macallinka
5 Xakamaynta Detox <———— Soo degso BILAASH ah (PDF)
Ka daawo Yuri Baro Sida loo Bilaabo Cuntada Cuntada:
4. 1oo Talooyin Fidoobay Fatahaada PDF: Download Halkan
October 28, 2013 Jimicsiga No Comment